ukulimala concomitant kuhlanganisa ezihlukahlukene izifo, sici for abasindile ezinzima imiphumela ebuhlungu izitho zomzimba eziningi kanye nezindawo zomzimba. Lapha, okokuqala izilonda isehlane lapho, kanye eziyinkimbinkimbi ukulimala ekhanda kanye izitho zangaphakathi eziwukwephulwa okukhulu uhlelo zemisipha.
Izizathu eziyinhloko ukuthola ezibuhlungu kuhlanganiswe
ukulimala concomitant avame kubangelwa ababelimele ezingozini ezimbi kakhulu, liphuma ukuphakama enkulu noma ngenxa izenzo zodlame. Ngokwezibalo esidumazayo, omningi walo ukulimala kuhlotshaniswa ezinzima ewela kubahlanganyeli ingozi ngezinyawo. Ngesikhathi esifanayo, amacala njalo iningi ukufa ugcinwe bokuwa besuka endaweni ephakeme.
Uma sikhuluma nezisulu zobudlova ke izimo ezinjalo zinezikhathi ukuhlukumezeka okukhulu cranial kanye ebusweni, kanye ukulimala umgogodla, izitho zangaphakathi.
ukulimala Kuhlanganiswe ziyahlukahluka ezihlukahlukene izimpawu, okuyinto ngokuyinhloko ixhomeke ekutheni indawo umonakalo ezibucayi kakhulu, khona ukopha, izimo ukushaqeka esibuhlungu, iziyaluyalu, ingqondo, izinkinga zenhliziyo, umgudu wokuphefumula.
I jikelele isithombe ngeziguli ukulungiswa ukulimala ezihambisana kusekelwe ehola ukulimala, khona lapho efihla usongo ekuphileni. Nokho, zikhona izimo lapho kukhona okungaphezu belingana kobukhulu yacekeleka.
Kukhona ngezigaba okulula polytrauma eziyinkimbinkimbi kuhlangene, okuyinto lifaneleka kakhulu uma isinqumo esifanele izinga lomonakalo odokotela oluphuthumayo.
Kususelwa ubunjalo umonakalo ukuhlukumezeka ezihambisana ekuholeni oluthathwa kanje:
evulekile noma avaliwe okulimala ebuchosheni ukulimala cranial ngokuhlanganyela uhlobo olufanayo nezinye izindawo zomzimba ezifana thoracic, umnyango celiac, izitho zomzimba, ukhalo;
evulekile noma avaliwe ukulimala esifubeni, kuhlangene kuhlasimulise nokulimala engqondweni;
evulekile noma avaliwe ukulimala celiac ingaphakathi, ikhanda, emgogodleni, izitho zomzimba;
kuyinkimbinkimbi Ukulimala umgogodla kuhlangene ukulimala nezinye izingxenye: ubuchopho, esiswini, ukhalo, esifubeni;
kungadaleka ingozi embi kakhulu okhalo, kuhlangene ubuchopho, celiac, ukulimala thoracic.
ukuhlukumezeka Multiple futhi kuhlanganiswe
Ukuba khona ezindaweni eziningi uma khona ukwazi isisulu kungaholela ekwakhekeni okuthiwa umonakalo psevdodominantnyh. isimo esinjalo sivame kubangela nesineke ukugxila ukulimala kancane ezinzima, kwakuphazamisa kusukela udokotela uphethwe yini.
Vimbela amaphutha zokuxilonga ekulungiseleleni amaningi ukuhlukumezeka eziphuthumayo ivumela mathupha futhi siqhuba-X-ray Ukuhlola amathambo awo wonke umzimba.
Esimeni yokungazi ngaso lapho ithola polytrauma amaningi inhlolovo wokuqala uqhutshwa ngokuba khona izilonda ku thorax, emgogodleni, esiswini, kogebhezi ukhalo. Ngesikhathi esifanayo, isizathu ukwenza-X-ray uphethwe bangaba khona esitho imihuzuko, edemas, hematomas, uncharacteristic isimo esitebeleni esitho motility.
ukunakekelwa okuphuthumayo Okokuqala
Heavy ukulimala concomitant libhekisela umonakalo lapho njengoba sinjalo isimo abalimala incike ijubane eziphuthumayo kuqala. Ukuze zokuhamba isiguli uma ukulimala kuhlanganiswe zidinga uhlaka kanzima, ngaleyo ndlela sinciphise amathuba umgudu isimiso egazini, ngifike ngibuyise bese ukugwema ulimi noma sokuhoxisa we mandible. Ngo parallel, esifundeni nasopharynx bahlanza gauze noma yezokwelapha ukuncela eziwuketshezi. Sinzima ukuhlukumezeka kuhlanganiswe kungadinga ukuvulwa okhethekile Gag umlomo.
Ngaphezu kwalokho, uma kwenzeka ukwehluleka kulula ukukhiqiza umuntu afakwe emishinini yokuphefumula umlomo i-umlomo noma kuyunithi KI-ZM. Lapho ngokushesha, esiphuthumayo, futhi okubaluleke kakhulu, usizo lesifanele ngokusebenzisa ukuqaliswa kulemisebenti lengenhla, isisulu uyalulama umoya, ngemva kwalokho ngokuvamile kwenzeka isimo bayazi.
Ngemva kwezidingo abathintekayo gumbi ezihambisana ukuhlukumezeka ekulinganiseni ezibalulekile emzimbeni imisebenzi kudinga esasikhipha poliglyukina, prednisolone, hydrocortisone. Ephambi kwezinduna yalimala kabi nemilenze lwemithambo ukopha nesenzakalo amahanisi esikhulu.
ukulimala concomitant ezinganeni, noma umuntu usesimweni esibucayi kakhulu lapho kukhona umfutho ophansi wegazi futhi kudinga nokuphathwa umjovo insulini emthanjeni 40% th kuyilapho zidla glucose poliglyukina hormone.
Esimeni a neuropathy kokushaya kwenhliziyo nokusimamisa ngesikhathi ingcindezi 80 mm HG. Art. esimweni esitho waphuka inhlanganisela is hhayi Kunconywa ukuba uchithe isikhathi e ukunqunywa amathayi. Kunalokho, focus egxile ekuvimbeleni ukwehluleka izitho ezibalulekile.
Sample siphendula isikhalazo. Igama elithi ka Ukucabangela izikhalazo zezakhamizi